Homeसमाचारसंसारकै सबैभन्दा खतर`नाक गीत जुन सुन्नेबित्तिकै मानिसले लिन्छन् आफ्नै ज्या`न, अहिले`सम्म कति अस्ताए ?
September 25, 2021 admin समाचार 1391
सबै संगीतले मानिसलाई आनन्द मात्र दिँदैन। कुनै कुनै गीतले आफ्नो ज्यान आफैंले लिने अवस्थामा लग्छन्। प्रेममाथि संसार`भरि नै अनेक विमर्श चल्छन्।
प्रेममाथि लेखिए`को एउटा यस्तो गीत छ, जसले संसारका धेरै मानिसलाई ज्यान दिन पे्ररित गर्यो। त्यो गीत हो– ग्लुमी सन्डे। संसारमा धेरै ‘स्याड सङ’ छन्। केही गीतले तपाई`लाई भावुक बनाउँछ, रुवाउँछ। यस्ता गीत पनि छन्, जसले तपाईं`लाई ‘रोमान्टिक’ बनाउँछ।
तर थोरै गीत छन्, जसले तपाई`लाई आफ्नै ज्यान लिन प्रेरित गर्छ। ‘ग्लुमी सन्डे’ थोरै त्यस्ता गीतमध्ये एक हो। प्रथम विश्व यु,द्धपछि सन् १९३३ मा हंगेरीका ३४ वर्षे रेज्सो सेरेस`ले लेखेको गीत ‘ग्लुमी सन्डे’ जब बजारमा आयो तब यसका स्रो`ताले ज्यान दिन थाले।
भियनाकी किशोरी, बुडापेस्टका पसले र लन्डनकी गृहि`णीले यही गीत सुनेपछि आफ्नो जीवन सिध्याएका थिए। अरू त अरू स्वयम् सेरेसले समेत सन् १९६८ मा आफ्नो जीवन सिध्याए। हंगेरीमा ‘सु,सा,इ,ड गीत’ भनेर कुख्याती क`माएको ग्लुमी सन्डे वास्तवमै यु,द्ध र वियोगको नतिजास्वरूप रचना गरिएको हो भन्ने विश्वास गरिन्छ। सेरेस मानसिक तनावमा रहेको बेलामा लेखि`एको यो गीत उनका साथी जा`भोरले प्रेममा धोका खाएप`छि लेखेको समेत भनिन्छ।
हंगेरीको १ लाख जनसंख्या बराबर ४६ ज`नाले यही गीतका कारण आफ्नो ज्यान लिएपछि यस गीतलाई प्रतिबन्ध लगाइयो। भियनामा, एक टिनेजर युवती`ले यही गीत सुनेर जीवनमा पूर्णवि`राम लगाइन्। उनको हातमा एउटा कागज थियो र त्यसमा ग्लुमी सन्डे गीत लेखिएको थियो।
लन्डनमा एक महि`लाले पर्खालबाट हाम`फालेर आफ्नो ज्यान दिइन्। आश्चर्य त के थियो भने उनको छेउमा यसै गीत लेखिएको कागजको टुक्रा भेटियो। यस गीत पहिलोपटक सन् १९३३ को ‘स्प्रिङ’मा बजाइएको थियो। हंगेरीको राज`धानी बुढापेस्टस्थित एक क्या`फेमा बसेका अध`बैंसेले सेरेशको यो गीत सुन्न रहर गरे। अर्केस्ट्रा सकियो र उनी सिधै घरतिर लागे।
आफूले बिलकुल नयाँ र भावनात्मक गीत सुनेर आ`एको उनले परिवारलाई बताएका थिए। एउटा यस्तो म्युजिक जसलाई दिमागबाट निकाल्नै नसकिने भन्दै उनले तत्काल आफ्नो ज्यान आफैं`ले लिए। यसरी दिन प्रतिदिन ज्यान गुमा`उनेको संख्या बढ्दै गएपछि हंगेरी सरकारले खोज गर्न थाल्यो। खोज`मा यहि भेटियो की त्यो सम`यमा जसले ज्यान दिए उनीहरुको सिधा सम्बन्ध उक्त गीतमा पाइयो। त्यसपछि सार्वजनिक स्थलमा ग्लुमी सन्डे बजाउनै प्रतिबन्ध लगाइयोे।
हंगेरियन कम्पोजर रेज्सो सेरेशले १९३२ मा ग्लु`मी सन्डेको ‘मेलोडी’ तयार पार्दा डिसेम्ब`रको एक आइतबारका दिन आकाश धुम्म थियो। कालो बादलले मौसम नै उदास बनाएको थियो। बेलुकीपखको समय, आफ्नै कोठामा बसेर उनी झ्यालबाहिर चि`याइरहेका थिए। घाम हराएर पानी पर्ला–पर्ला जस्तो भएको थियो। प्रेमीका`सँग भर्खरै ब्रेकअप भएर निराश थिए।
सेरेसले बियोगमै पियानो बजाउँदै गर्दा एउटा धुन निस्कि`यो, जसमा प्रेमिका र मौसमको अनौठो संयोग थियो। उनले भने ‘वाउ ग्लुमी सन्डे।’ अब उनको खुसी`को सीमा रहेन। गीतलाई एउटा पुरानो पोस्टकार्डमा लेखे। उनले ३० मिनेटभित्रै गीत तयार पारे। भ,या,न,क नि,रा,शा,ज,नक त्यो म्युजिक उनलाई खुबै मनप¥यो। र त्यो गीत€लाई रिलिज गर्न तयारी थाले।
उदासी आइतबार, मेरो समय निन्द्रा`विहिन छ। प्यारो छायाँ म संख्याविहीन भएर बाँच्छु। साना सेता फूलहरुले जगाउन सक्दैनन्, त्यहाँ जहाँ होइन दुखका काला कोचले तपाई`लाई लगेको छ। परीहरुलाई तिमी कहिल्यै फर्किन्छौं भन्ने सोच छैन। यदि म पनि तिमीसँगै सामेल हुन चाहेमा उनीहरु रिसाउने त छैनन् ? उदासी आइतबार
October 16, 2021 admin समाचार 738
July 12, 2021 admin समाचार 6584
April 23, 2021 admin समाचार 2692